बिदा हैन स्वास्थ्य सेवामा वृद्धि- विचार - कान्तिपुर समाचार
वैशाख २७, २०७९ ढुण्डीराज पौडेल
सरकारी स्वास्थ्य संस्था या अस्पतालमा सार्वजनिक बिदाका दिनहरूमा समेत उपचारको व्यवस्था हुनुपर्नेमा उल्टै अन्य सरकारी कार्यालयसँगै सार्वजनिक बिदाबाहेक हप्तामा आइतबार पनि बहिरंग (ओपीडी) सेवा बन्द गर्नु जनस्वास्थ्य सेवाप्रतिको उदासीनता ठहर्छ ।
अस्पताल बन्द गरेर कति इन्धन बचत हुन्छ ? इन्धनको चरम दुरुपयोग त, आवश्यक नै नपरेको सत्ता तथा प्रतिपक्षी पार्टीका नेताहरूको सुरक्षामा हुने गरेको छ । त्यस कारण इन्धन र वैदेशिक मुद्रा बचाउने नाममा सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्था नै बन्द गर्नु जनताप्रतिको गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो ।
सरकारी चिकित्सा सेवामा तीस वर्षभन्दा बढी अवधि व्यतीत गरेको नाताले पंक्तिकारको ठहर छ— दाबी गरिएजस्तो आइतबारको थप एक दिनको बिदाले बहिरंग सेवा मात्र होइन, अपितु आकस्मिक सेवासमेत प्रभावित हुने निश्चित छ । बहिरंग सेवा र आकस्मिक सेवाहरू एक–अर्काका परिपूरक हुन् । एक दिनभन्दा बढी लगातार बहिरंग सेवा बन्द हुँदा आकस्मिक सेवाको नियमितता र उपलब्धतामा पनि असर पर्छ ।
बहिरंग सेवा बन्द रहँदा आकस्मिक सेवा नियमित र सुचारु हुन्छ भन्ने दाबी सरकारी चिकित्सकहरूका पेसागत संगठनहरूलाई सुहाउने कुरा होइन । उनीहरूको माग हुनुपर्थ्यो— सेवा, जोखिम, प्रकृति, अवधि र श्रम अनुसार चिकित्सक एवम् स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पारिश्रमिकको व्यवस्था गरी ३६५ दिनै बिनाअवरोध चिकित्सा सेवाको प्रत्याभूती दिनु । तर पेसागत संगठनहरूका जिम्मेवार एवम् नेतृत्वमा रहेकाहरूको व्यक्तिगत चाहना र स्वार्थ नै सर्वोपरि हुनु दुर्भाग्य छ । सेवाग्राही र स्वास्थ्यकर्मी दुवैको हित एकअर्कामा निहित हुने तथ्यलाई पेसागत संगठनका नेतृत्वमा रहेकाहरूले पटक्कै आत्मसात् गरेनन् ।
विश्वका धेरैजसो देशमा चिकित्सकका पेसागत संघ–संगठनहरू, विभिन्न राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको स्वार्थपूर्ण ताबेदारी गर्दैनन् । बरु विशुद्ध पेसागत हकहितका सवाल र जनस्वास्थ्यजस्ता मौलिक हकको सुनिश्चितताका निम्ति प्रभावपूर्ण दबाब सृजना गर्छन् । तर नेपालको चिकित्सक संगठनहरूले निजी क्षेत्रसँग शुल्क वृद्धि गर्ने संयुक्त वक्तव्य निकाल्छन्, सरकारले दुई दिन सरकारी कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय गर्दा सरकारी अस्पतालमा पनि लागू गर्ने माग गर्छन् । अन्यजस्तै स्वास्थ्य सेवामा पनि सरकारलाई निर्देश गर्न सक्ने संवैधानिक स्वास्थ्य आयोगको सट्टा नेपालमा व्यवस्था भएको नेपाल मेडिकल काउन्सिल स्वास्थ्य मन्त्रालयप्रति उत्तरदायी र निर्भर छ ।
चुनावी घोषणापत्र अनुसार सार्वजनिक अस्पतालहरूबाट प्रदत्त सेवाको गुणात्मक एवम् मात्रात्मक वृद्धि गर्न चिकित्सकहरूका निम्ति ‘एक चिकित्सक, एक संस्था’ को नीति लागू गर्ने लिखित प्रतिबद्धता केपी शर्मा ओली सरकारले गरेको थियो । तर, नजिकका केही निजी संस्थाहरूको प्रभावमा परेर अन्तिममा खारेज गरियो । सुधारको नारा दिएर ओली सरकारलाई विस्थापित गरेको गठबन्धन सरकारको नेतृत्व त झनै अकर्मण्य बन्न पुगेको छ । सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरूमा विकृति, विसंगति र कमजोरीहरू झनै घनीभूत भएको प्रतीत हुन्छ । वर्तमान स्वास्थ्यमन्त्रीले दाबी गरेजस्तो सार्वजनिक एवम् सरकारी अस्पतालमा आईसीयू, अन्तरंग, शल्यक्रिया आदिमा के मनग्य उपलब्ध छ ? समयमै आर्थिक व्यवस्था हुन नसक्दा बिमा सेवा नै बन्द हुने संघारमा पुगेको बारे के उनी अनभिज्ञ छन् ? के उनी वीर लगायतका सार्वजनिक अस्पतालको निरीक्षण गरी समस्याहरू समाधानार्थ पहल गर्न चासो राख्छन् ? समाजवादीको दाबी गर्ने कांग्रेस र झनै साम्यवादीको दाबी गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीले त सरकारी अस्पताल एवम् स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट प्रदत्त सेवालाई नियमित र सशक्त बनाउन सक्नुपर्थ्यो । यसका लागि पहिलो सर्त उच्च मनोबल युक्त स्वप्रेरित पूर्णकालीन दक्ष चिकित्सक एवम् स्वास्थ्यकर्मीहरूको अपरिहार्यता हो । सरकारी अस्पतालमा बहिरंग, अन्तरंग आदिमा सेवालाई पारिश्रमिक र मूल्यांकनको आधार बनाइन्न । त्यसैले चिकित्सकहरू केही घण्टा सरकारी अस्पतालमा बिताएर बाँकी समय अन्यत्र निजी अस्पतालमा काम गर्न बाध्य छन् । यसो हुनुमा मूलतः सरकार नै जिम्मेवार छ ।
सरकारी अस्पतालको बहिरंग सेवा सामान्यतया बिहान १० बजेदेखि बढीमा २ बजेसम्म चल्छ । उक्त समयमा आउने आकस्मिक समस्याका बिरामीहरू पनि बहिरंगमै आउन बाध्य हुन्छन् । त्यसैले अस्पताल र सेवाग्राहीहरूको चाप अनुसार सेवाले निरन्तरता पाउनुपर्छ । अहिलेसम्म हप्तामा शनिबार र सार्वजनिक बिदाको एक दिन
बहिरंग सेवा बन्द गर्दासमेत सेवाग्राही बिरामी र तिनका अभिभावकहरूलाई सकस पुग्ने गरेको छ, त्यसमाथि दुई दिन नै बन्द हुँदा निजीमा उपचार गर्न नसक्नेहरूलाई झनै पीडा पुग्छ । आधुनिक चिकित्सा प्रणालीमा बिरामीको एक पटक नाडी समातेर औषधि लेख्न मिल्दैन । रोगको निदानका निम्ति विभिन्न परीक्षण आवश्यक पर्छ । शुक्रबार अस्पतालको बहिरंग विभागमा जँचाएर चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम दिइएका रेडियोलोजी, रगत आदिको परीक्षण गराएका बिरामीले शनिबार र आइतबार बहिरंग बन्द हुँदा सोमबारसम्म, अझै सम्बन्धित चिकित्सकलाई रिपोर्टहरू देखाई उपचार लिन कम्तीमा ३–४ दिन कुर्नुपर्ने हुन्छ । रोग निदान नभई उपचार सम्बन्धी सल्लाह दिन पनि सकिन्न । यो अवधिमा बिरामीको अवस्था जटिल हुन पनि सक्छ । त्यस्तै दूरदराजका बिरामीहरूका निम्ति सकस र आर्थिक बोझ पनि थपिन्छ । त्यसैले बिदा होइन स्वास्थ्य सेवामा वृद्धि गर्नुपर्छ ।
प्रकाशित : वैशाख २७, २०७९ ०७:२८